Ka ganacsiga duurjoogta sharci darada ah ayaa ku soo badanaya deegaanada xuduuda Itoobiya waxay noqonaysaa marinka ganacsiga duurjoogta caalamiga ah oo khatar ku ah. - ዜና ከምንጩ
Ka ganacsiga duurjoogta sharci darada ah ayaa ku soo badanaya deegaanada xuduuda Itoobiya waxay noqonaysaa marinka ganacsiga duurjoogta caalamiga ah oo khatar ku ah.
Khubarada ku sugan xuduudka dalka Itoobiya, gaar ahaan Deegaanka Soomaalida ee Togojale , ayaa sheegay in uu noqonayo goob si weyn looga ganacsado duur joogta.
Sida uu qabo Mesfin W/Semayat, oo ah cilmi-baare ku takhasusay arrimahaas, silsiladda ka ganacsiga duur-joogta ayaa u dhexeysa Galbeedka ilaa Bariga Afrika.
Sida uu sheegay Mesfin, waxaa si sharci darro ah loo suuq geyn doonaa haragga duur-joogta, shimbiraha, fool-maroodiga iyo xayawaannada kala duwan ee laga keeno dalal kale oo ay Kenya ku jirto, kuwaasoo ku takhasusay duur-joogta.
Xoolahan, gaar ahaan kuwa Haramcadka, ayaa si sharci darro ah loogu soo qaadaa badda Yemen, kadibna loo sii gudbiyaa dalal kala duwan. Madaxa ilaalinta duurjoogta, Mesfin, ayaa u sheegay Addis Ababa saaka in afartii neefba hal keliya lagu tahriibin doono safarkan.
Isticmaalka guriga ee xayawaanka duurjoogta ah ayaa sidoo kale mamnuuc ka ah sharciga caalamiga ah, ganacsiga haramcadka caalamiga ahna waa la mamnuucay tan iyo 1975-kii.
Si kastaba ha ahaatee, intii u dhaxaysay 2010 iyo 2019, in ka badan 3,600 oo haramka badbaaday ayaa lagu iibiyay si sharci darro ah, kaliya 10 boqolkiiba ka mid ah ayaa waxaa qabtay ciidamada ammaanka.
Daraasad ay samaysay Hay’adda Ilaalinta Xayawaanka Adduunka, ayaa lagu sheegay in diyaaradda Ethiopian Airlines ay door weyn ka qaadanayso kor u qaadista ka ganacsiga duurjoogta.
Sida warbixinta lagu sheegay tiro badan oo xamaarato ah oo asal ahaan ka soo jeeda badhtamaha iyo galbeedka Afrika ayay diyaarada Ethiopian Airlines u daabushay wadamo kala duwan gaar ahaan bariga dhexe.
Sida warbixinta lagu sheegay, marka laga soo tago Bariga Dhexe, Ethiopian Airlines waxay sidoo kale qaadi doontaa duur joogta Japan, South Korea, Thailand, Hong Kong, Oman, Malaysia, Germany, Italy iyo UK. Sida ay hay’addu sheegtay, duurjoogta, qoolleyda, masaska iyo dabaqyada ayaa ah xayawaanka ugu badan ee ay diyaaraddu qaado.
Diyaarada Ethiopian Airlines ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeediyay website-keeda rasmiga ah, waxayna tiri, “Anigoo xubin ka ah ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka (ATA), waxaan u qaadayaa xoolaha nool si nabad ah oo sharci ah.
Xubin ka tirsan Hay’adda Duur-joogta Itoobiya, kana tirsan Hay’adda kala wareejinta Duur-joogta, ayaa saaka u sheegay Addis Ababa in eedaha loo jeediyay Shirkadda Diyaaradaha aanay waxba ka jirin. Waxa uu sheegay in qirashadiisa lagu helay jirdil, waxa uuna sheegay in qirashadiisa lagu helay jirdil.
Amanuel Tefera oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Wuchale ee dalka itoobiya ayaa u sheegay New Morning: “Xubnaha kastamka ee deegaankeena waxa ay qaataan laaluush si ay uga caawiyaan duurjoogta si sharci darro ah ku soo gala Somaliland.
Waxa uu intaa ku daray in ugu yaraan afar Haramcad bishiiba laga soo dhoofin doono dalka Itoobiya, iyadoo la sii marinayo dalalka Carabta, iyadoo la sii marinayo Somaliland.
Suuqyada duur-joogta ayaa si xawli ah ugu socda Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Tujaar Carab, ayaa si gaar ah u sheegay in dhaqashada duurjoogta, sida xayawaanka rabaayada ah, ay kordheen. Sida uu qabo khabiirku, “Hal Haramcad ayaa hadda lagu iibiyaa illaa $10,000 dalalka Carabta ee Bariga Dhexe.”
Inta badan Haramcadka waxaa ka iibsada dadka wax tahriibiya ee Itoobiyaanka ah, waxaana halkii dibi laga bixiyaa 10-15,000 oo birr,” ayuu yiri.
Naju Jami waa gabadh u dhalatay Somaliland oo itoobiyan ah, kuna takhasustay ilaalinta duurjoogta. Waxay ku tilmaantay deegaankka Soomaalida marin muhiim ah oo dadka wax tahriibiya ay uga gudbaan Jasiiradda Carabta.
Sida laga soo xigtay Hay’adda Ilaalinta Xayawaanka Adduunka, waxa dunida ku nool 7,100 oo Haramcad ah, boqolkiiba 90 ka mid ahna waxa ay ku sugan yihiin Afrika.
አዲስ ማለዳ Tahisaas 9 2014 No 26
Total views : 7537156